नेपाल आर्मी भर्सेस श्रीलंका पुलिस : नेपाली प्रशिक्षक र कप्तान भन्छन्, 'तयारी राम्रो गरेका छौं, यो पहिलो खुड्किलो हो'
May 7, 2021 | २४ बैशाख २०७८
May 7, 2021 | २४ बैशाख २०७८ Search
6th April 2021, 01:51 pm | २४ चैत्र २०७७
काठमाडौं : एएफसी कप अन्तर्गतको प्रिलिमिनरी स्टेजमा भोलि त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले श्रीलंका पुलिस स्पोर्टिङ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतियोगिताको तयारीलाई लिएर आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले टिम तयारी अवस्थामा रहेको बताए।
'क्लब लाइसेन्स पाएदेखि नै हामीले तयारी सुरु गरेका थियौं। कीर्गिस्तानसँग पनि खेलियो। भोलिको म्याचलाई लिएर राम्रो तयारी भएको छ,' प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, 'यो एउटा अवसर हो। यसलाई खेलाडीले पनि बुझेका छन्। यसलाई हामीले एउटा भर्‍याङका रुपमा लिएका छौं। जितकै लागि खेल्छौं।'
प्रशिक्षक न्यौपानेले राम्रो अभ्यास भएको र टिमसेट मिलेकोले राम्रो प्रदर्शन हुने अपेक्षा रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय कीर्गिस्तानसँगको खेल र हेटौंडामा अफ्रिकी टिमसँगको खेलले पनि राम्रो अनुभव भएको बताए।
त्यस्तै आर्मीका कप्तान भरत खवासले भोलिको खेललाई लिएर राम्रो तयारी रहेको बताए। आफ्नो टीममा खासै फेरबदल नभएको र सधै खेलिरहेका खेलाडी नै साथमा रहेको बताउँदै त्यो आफ्नो प्लस प्वाइन्ट हुने बताए।
'अवसर पनि छ र चुनौती पनि। फिजिकल र मेन्टल दुबै रुपमा हामी तयार छौं,' उनले भने।
त्यस्तै श्रीलंकाका प्रशिक्षक झिआउ अल्पेन्सुले छोटो तयारीपछि आफूहरु नेपाल आएको बताए। काठमाडौको तापक्रम र मौसमको हिसाबले कोलम्बोको भन्दा फरक भएकाले खेलमा प्रभाव पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनले आफूहरु चुनौती लिएर नै नेपाल आएको बताए।
'हाम्रो टोलीमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलाडीहरु छैनन्। तीन जना विदेशी खेलाडी भने छन्। तीनै जना घानाका हुन्,' उनले भने, 'कोभिडको कारण लामो समय अभ्यास गर्न पाएनौ। छोटो समयको तयारी पछि हामी यहाँ खेल्न आएका हौँ।'
आर्मीले खेलका लागि २० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ। प्रतियोगितामा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्ने र साथै सहजीकरणका लागि सहयोग गर्ने बताइएको छ।
आर्मीले साधारणतर्फ ३०० र भीआईपीतर्फ ५०० मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। एसियन फुटबल कन्फिडरेसन एएफसीले भने ५० प्रतिशत दर्शक स्टेडियममा भित्र्याउने मिल्नेगरी अनुमति दिइएको बताइएको छ।
खेल चैत २५ गते बेलुकी साढे ५ बजे दशरथ रंगशालामा तय भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो : प्रणालीले थेग्‍नै नसक्ने गरी संक्रमण बढ्यो, अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन सकिन्न, मापदण्ड मान्न अपिल
पार्टी विभाजनमा नलिएको विश्वासको मत किन लिन चाहन्छन् ओली? असफल भए विकल्प के?
देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई शंकर पोखरेलले सिकाए पाठ, 'राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्नु लज्जास्पद'
अन्तिम समयमा माओवादीले किन लियो समर्थन फिर्ता?
ओलीका कदमलाई काउण्टर दिन के छ गठबन्धनको तयारी?
नितेशजंग कुँवरले खुलाए सांगीतिक यात्रा छोड्नुको कारण
मोदीले चाहेको भए नियन्त्रण गर्न सक्थे कोभिड-१९ सकंट, मार्च अगाडि नै वैज्ञानिक सल्लाहकारहरुले चेतवानी दिएका थिए भयावह अवस्थाको
ओलीको प्रचण्ड टार्गेट मुभ: देखाइदिने होडमा माओवादी कोटाका नियुक्ति धमाधम खारेज
मुस्ताङमा सुटिङ सकाएर फर्कियो भारतीय फिल्म 'थिरिमालि' को टिम, 'छायाङ्कन गर्दा मिचिएको छैन स्वास्थ्य मापदण्ड'
पदमुक्त भएकोमा अमिक शेरचन खुसी : खुला जेलबाट मुक्त गरिदिनुभएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद